Wednesday October 10, 2018 - 20:19:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in markale lagu weeraray ciidamada Xabashida Itoobiya iyo kuwa Jabuuti.
Qarax aad u xooggan ayaa maanta duhurkii ciidamada Jabuuti lagula eegtay meel ku dhow deegaanka Buurweyn oo qiyaastii 35Km dhanka Koonfureed uga beegan magaalada Buula Burde.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxu uu qeybta hore ka burburiyay gaari Gaashaaman oo ay ku xirnaayeen qalabka Miinooyinka baara, saraakiil Jabuutiyaan ah ayaa larumeysanyahay in waxyeello kasoo gaartay qaraxa.
Dhinaca kale qarax jugtiisa laga maqlay inta badan deegaannada hoos taga degmada Jalalaqsi ayaa maanta gelinkii dambe ciidamo Itoobiyaan ah lagula beegsaday wadada laamiga ah.
Wariye Nuur Cali Warsame oo Hiiraan ku sugan SomaliMeMo khadka Taleefanka ugu sheegay in qarax Miino uu burburiyay gaari Uuraal ah oo ay wateen ciidamada Itoobiya.
Habqanka ciidamada huwanta ah oo aad udaallan ayaa la sheegay in caawa ay ku hoyanayaan wadada laamiga ah gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaannada Jimbileey iyo Buurweyn.
Ciidamada Itoobiya ayaa saaka kasoo ruqaansaday deegaanka Buurweyn oo shalay ay soo gaareen walina kama leexan wadada laamiga ah illaa iyo haddana macadda halka ay kusii jeedaan in ay dhanka Muqdisho usocdaan iyo in ay degmada Jalalaqsi uleexan xoonaan.
Waa isbuucii 3aad oo weerar dhabbagal ah iyo qaraxyo ay ciidamada Xabashida Itoobiya iyo Kuwa Jabuuti kula kulmayaan wadada laamiga ah, 13 maalmood ka hor ayay kasoo kicitimeen Beled Weyne illaa iyo haddana waa wadda yaal lakulmaya weerar dhiigbixin ah.